मर्म जीवनको....कर्म निधारको....: लिम्वूवान आन्दोलन र CCO अभियान.....
अझ अर्को उदेक लाग्दो कुरो के थियो भने लिम्बुवानका लिम्बू नेताहरूको चिन्तनशैली । पञ्चायत कालमा होस् वा वहुदलकालमा लिम्बुवानमा लिम्बू नेताहरूको उपस्थिति थियो । आशा के हुन्थ्यो भने ताप्लेजुङबाट चुनाव जितेको कुनै नेताले संखुवासभाबाट चुनाव जितेको कुनै नेतासँग सम्पर्क गरोस् । पान्थरको नेता र धनकुटाको नेता, इलाम र मोरङको नेता बीचमा भेटघाट,सम्पर्क होस् । कम्तिमा यो नौ जिल्ला लिम्बुवानका नेताहरूमा चिनापर्ची गरियोस् ,सम्पर्क वढाइयोस् ताकि विस्तारै लिम्बुवानी भावना बढोस् । तर त्यस्तो कहिले हुन सकेन । नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको वीस वा पच्चीस गा.वि.स. भित्र मात्र सिमित रहे । लिम्बुवान भनेको निर्वाचन क्षेत्रको तेइस वटा गा.वि.स. मात्र होइन,लिम्बुवान भनेको अरुण पूर्वको नौ वटा जिल्लाहरू हो । संखुवासभाको मान्छेले खान पाएन भने पान्थरको मान्छेले अन्न जुटाएर पठाइ दिनु पर्छ । ताप्लेजुङमा हिउँ पर्‍यो भने मोरङमा जाडो महसुस हुनुपर्छ-त्यो लिम्बुवानी भावना हुनेछ । यस्तो हुनु पर्थ्यो तर त्यस्तो कहिले भईरहेको थिएन । यी विसंगतिहरूलाई काक्रा चिरे झै चिररे शशक्त लिम्बुवानी भावना जगाउन र लिम्बुवान व्यापी संगठन निर्माण गर्न हामीले अअय अभियान संचालन गर्ने निर्णय गर्‍यौ । यस अभियान अन्तर्गत हामीले हजारौं तरेबा, तरेमाहरूलाई सम्पर्क गररे भेट्यौ र उनीहरूसँग यस्तो कुराकानी गर्‍यौ -तपाईहरू माया प्रितिको पनि कुरा गर्नुस् र त्यसको साथसाथै लिम्बुवानको पनि कुरा गर्नुस् । जसरी तपाई आफ्नो तरेमा/तरेबालाई माया गर्नुहुन्छ त्यसरी नै एकपल्ट लिम्बुवानलाई पनि माया गररे त हेर्नुहोस् । लिम्बुवान नै रहेन भने माया- प्रितिको घर कहाँ बनाउने होला ? भनेर उनीहरुलाई नम्र भाषामा सोध्यौं । भारत की चर्चित लेखिका अमृता प्रितमले एक थी सारा’ नामक उपन्यासमा लेख्नु भएको -"म आकाश वेचेर ताराहरू किन्दिन" भन्ने वाक्यंश सुनायौ । हामीसँग झिलिमिलि ताराहरू भएपनि ति ताराहरू राख्ने आकाश नै छैन भने त्यसको के अर्थ हुन्छ र - भन्यौ । हामी पढरे डिग्री हासिल गर्छौ विदशे गएर पैसा कमाउछौ तर हाम्रो लिम्बुवान भूमि नै रहेन भने त्यो डिग्री र त्यो पैसा पनि अर्थहिन हुने रहछे भन्यौ । लिम्बुवानको अस्तित्व वेगरको राजनीति,विकास र साहित्यको कुनै अर्थ रहने छ भन्यौ । लिम्बुवानका विभिन्न ठाउँमा बसेर भाषा, लिपिको लागि एक्ला एक्लै लडिरहेको व्यक्तिहरूलाई भेटेर भन्यौ- "आज टिमवर्कको जमाना छ,नेटवर्कको जमाना छ, त्यसैले सं.लि.रा. परिषदमा संगठित भएर संघर्ष गरौ एक्लो आवाज आज कसैले सुन्दैन, संगठन नै शक्ति हो ।" हाम्रो प्रस्ताव र भावनालाई सहर्ष स्वीकार गरी हजारौ लिम्बुवान प्रेमीहरू यस परिषदमा संगठित हुनुभयो । लिम्बुवान भन्न लजाउनहे रूलाई हामीले भन्यौ "गर्वले भन, हामी लिम्बुवानवासी हौ ।" हामीले एउटा नारा अघि सार्‍यौ-"नेपाल हाम्रो देश हो लिम्बुवान हाम्रो घर हो ''Nepal is our country ,limbuwan is our homeland" लजाउनेहरूको लाज विस्तारै हराउँदै गयो । साथीभाइ भेटघाट हुदा, "जय लिम्बुवान", "काङसोरे अभिभादन", "लिम्बुवानी अभिभादन" जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्न थाल्यौ । आज जताततै जय लिम्बुवान’ भनेको सुन्न पाईन्छ । हामीले लिम्बुवानका नेताहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्‍यौ "तपाइहरूको दृष्टिकोण र चिन्तनलाई लिम्बुवानीकरण गर्नुस् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको तेइसवटा गा.वि.स.लाई सबैथोक नसम्झीनोस्, सोचाईहरूलाई लिम्बुवानभरि घुमाउनुहोस् । कुनै संगठन बनाउनु छ भने कम्तिमा लिम्बुवान भरिको संगठन बनाउनुस् । भोलि लिम्बुवान प्राप्त गरेपछि यो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रहरूको सिमाना परिवर्तन हुन्छ ।" हाम्रो लगातारको भनाईले धेरै साथीहरूको विचारमा परिवर्तन आएको छ । वार्ड, गा.वि.स.,क्षेत्र र जिल्लाको साँगुरो घेरामा मात्र अलमलिरहेका साथीहरू अहिले लिम्बुवानको बारेमा सोच्न थालेका छन्, यो CCO अभियान कै सफलता हो । CCO अभियान अघि बढाउने क्रममा पान्थर,तेह्रथुम र ताप्लेजुङ जिल्लाहरूमा लगातार सम्पन्न भएको ४८ वटा आमसभाहरूमा यो पङतिकारले प्रमुख अतिथि भएर भाषण गर्ने सौभाग्य पाएको थियो । ति आमसभाहरूमा मैले CCO को महत्वबारे बोले,सुतेको लिम्बुवानी जनताहरूलाई ब्युझाउँने प्रयास गरे । यो ऐतिहासिक यात्राको बारेमा "यात्रा-स्मरण" लेख्ने योजना गरेको छु । लिम्बुवानको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको CCO अभियानलाई चिरस्थायी बनाउन मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको संगठन विभागको नाम नै अअय सचिवालय राखिएको छ । यस परिषदमा संगठन विभाग प्रमूखको ठाउँमा CCO सचिवले काम गर्दछ । छोटकरीमा भन्नु पर्दा सम्पर्क गर्ने सरसल्लाह गर्ने र लिम्बुवान मुक्तिको लागि यस परिषदमा संगठित हुने अभियान नै CCO हो । यो अअय आजपनि चाहिन्छ र भोली पनि चाहिन्छ । यहि CCO नभएर नै हामीहरूले वि.सं. १८३१ र वि.सं. २०२१ सालमा लिम्बुवानको रक्षा गर्न सकनौ । आज, थोर बहुत CCO हुदैछ त्यसैले लिम्बुवानको आन्दोलनले पनि उचाई प्राप्त गर्दैछ । हामीले सोचे जस्तो लिम्बुवान प्राप्त गर्न अझ बढि CCO हुनुपर्छ । हामीले तपाईहरूलाई खोज्दै आउन भ्याएनौ भने तपाइहरू हामीहरूलाई खोज्दै आउनुस तर कोही पनि रमिते भएर नवसौ । संगठन आफैमा शक्ति रहेछ । आज हामी लिम्बुवानका नौ वटै जिल्ला सिडिओहरूलाई एकैपल्ट ज्ञापनपत्र दिन सक्छौ नौ वटै जिल्लाहरूमा एकै पल्ट राँके जुलुश र आमसभा गर्न सक्छौ । बल्ल तपाई हाम्रो सोचाई र सपनाले लिम्बुवानी आकार प्राप्त गर्‍यो । लिम्बुवानप्राप्त गरेपछि अझ बढि CCO को महत्व बढ्ने छ । किनकि लिम्बुवानको प्राप्ति जतिकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ लिम्बुवानको विकास र लिम्बुवानको स्थायित्व । लिम्बुवानको ठूलो-ठूलो आयोजनाहरू पुरा गर्न थोरै पुँजी र थोरै जनशक्तिले हुदैन । यसको लागि भएभरको पुँजी संग्रह गर्नुपर्छ त्यसको लागि पनि संगठित हुनै पर्छ । लिम्बुवानको सिमानाको कुरा आउँछ त्यसको लागि पनि संगठित हुनै पर्छ । विश्वकै शक्तिशाली देशहरू भारत र चीनलाई छोएर लिम्बुवान रहेको हुनाले यहाँका वासिन्दाहरूले "ग्लोवल पोलिटिक्स '' Global politics" लाई बुझनु पर्छ र हरदम आफू सक्षम र संगठित भईरहनु पर्छ । अन्त्यमा, लिम्बुवान मुक्ति आन्दोलन र CCO अभियान भनेको अभिन्न अङ्गहरू हुन । हामीले CCO लाई सक्रियता पूर्वक संचालन गरिरहन सक्यौ भने मात्र यस धर्तीमा लिम्बुवान नामक फूल संसारको आँखालाई आकर्षित गर्दै फुलिरहने छ । यहि महत्वलाई बुझेर यस परिषदका सबै तहका समितिहरू CCO अभियानलार्इ नौवटै जिल्लाहरूमा अझ तिव्रताका साथ अघि बढाउन, यहि आग्रह छ ।
Posted by mirein at 4:39 AM